Kismaayo News » Kismaayo : Sawir iyo Sadar Muuqda
Kismaayo : Sawir iyo Sadar Muuqda
Kn: KismaayoNews waxa ay soo dhex martay meelo kala duwan oo Kismaayo gudaheeda ah si akhristayaasha aan sawir cad ooga siinno sida ay magaalada tahay, meelihii aan booqanayna waxaa ka mid ahaa dekadda iyo goobo muhiim ah oo aan badankooda sawiradooda idiin soo gudbineyno, kuwa kalana qoraal idiinku sheegeyno.
Dekadda Kismaayo waa meel samays ahaan iyo joqoraafi ahaan cibaaro ku dheehantahay kuna taalla meel barriga aad ooga fog, baddana bartankeeda ku taala, muuqaalka guud ee dekadda waa mid Panaroma ah ama ishu u bogeyso, waa meel nadiif ah, nidaamsan, islamarkaasina aad moodo in burburkii dalka ka dhacay uusan saameynin.
Wali waxa aad wadooyinka hareerahooda ku arkaysaa dhuumihii shidaalka ee haamaha shidaalka geyn jirey oo wali sidoodii ah.
Amaanka waa mid aad loo adkeeyey waxaadna maraysaa shan meelood oo ciidamada ku baaraan baabuurta iyo shacabka, loomana ogola qof aanan kaarka shaqada heysanin.
Gudaha marka aad tagto waxaa dekadda ku xiran wax ka badan 10 gaadiidka badda ah oo badeecooyin kala duwan wada, waxaa noo muuqanayay bariis iyo alwaax la dajinayo.
Waxaa sharci ah marka ay doonta soo xirato in laga lulo calanka Soomaaliya, iyadu calankeey dooni ha wadatee.
Marka aad dekadda kasoo laabato, oo aad soo dhaafto koontaroolka ugu sokeeya, meesha ugu horeysa ee aad maraysid waa xeradii mariinada, dhegaxaas aad xagga hoose ku aragtaan oo kaliya ayaana ka haray, waa bugcaddii salaanta ciidamada ooga qaadan jirey madaxweynaha dalka, inta kale burbur xoogan ayaa soo gaaray dhulkiina dad shacab ah ayaa boobay.
Waxaa dhinaca ku heysa xeradii ciidamada Biliis Militaariyo, taalada aad xagga hoose ka aragtaan ee badda eegeysa ayaa iyaduna ka hartay.
Waxaa isna ku dhegen xeradii ciidamada Hangashta oo iyadu wax ka noolyihiin, dad shacab ahna degenyihiin.
Marka aad sidaasi u dhaaftid waa xaruntii Ante Banana ama shirkaddii qaranka ee Muuska oo iyadu sideedii u dhisan, dadna degenyihiin.
Bangigii dhexe ayaanan ka fogeyn kaasi oo burbur xoogan uu gaaray, haweeney ayaa dhismaha hoostiisa ka dhisatay mundulaha fargaaska ka samaysan ee aad aragtaan.
Xaaladda guud ee magaalada marka aad sii dhex martid waa mid aad usoo hagaagaysa, dadka marka aad waraysatidna waxa ay kuu sheegayaan in ay dareemayaan xoriyad badan oo xagga dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga ah.
Mid ka mid ah dadka dukaamada ku leh Kismaayo oo aan waraysanay waxa uu nagu yiri “Waa markii koowaad oo kalyantigeyga (macaamiishayda) aysan dukaankayga ka waayin waxa ay rabaan, badeecadu hadda igama go’do, markii horana bilooyin ama sanooyin ayaan mahayo iibin jirey badeecooyinka qaar”.
Qalabka dhismaha ganacsigiisa waa mid sare u kacaya, waxayna ka dhigantahay dhismaha magaalada ku socda, koox shaqaale ah oo ka shaqaynaysay guri weyn oo wadada hareerteeda laga dhisayo waxa ay noo sheegeen in maanta ay jiraan shaqooyin kala duwan oo ay kala doortaan, markii horana ay dhif iyo naadir ahayd in shaqaba la helo.
Hoteelada magaalada waa kuwa dib u furmaya, islamarkaasina isu diyaarinaya in ay la jaanqaadaan isbadalka dowladnimo iyo furfurmista xagga ganacsiga, hoteelka weyn ee caanka ah ee Waamo waxaa ku socda dhismo dib loogu dayactirayo, waxaa furmaya hoteelo kale oo qorshahooda la wado, waxayna tani ka timid dadka oo dib magaalada ugu soo laabanaya.
Wadooyinka magaalada dayacnaan xoogan ayaa ka muuqata, waxaa wadada hareeraheeda iyo dhexdeedaba qabsaday ciid badan iyo waliba qashin, laamiga meelaha qaar isagoo ka hagaagsan waa uu duugmey.
Laakiin dadka shacabka ah waxa ay kuu muujinayaan rajo ah in haddii xagga siyaasadda wax laga qabto, ay waxyaabaha kale oo dhan ay hagaagi doonaan.